शिक्षा प्रणालीको सुधारको पहिलो सर्त नै विद्यार्थीलाई पढाउन बन्द गरिनुपर्छ । सिक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीका निम्ति त्यो वा
तावरण बनाइदिनु हो । सुझाव दिनु हो । समाधानतिर उन्मुख हुन प्रेरित गर्नु हो । चम्चामै राखेर पिलाउनु होइन । जब विद्यार्थीलाई कुनै परिस्थितिमा राखिन्छ, काम गर्न दिइन्छ, गल्ती गर्न दिइन्छ, सुझाव दिइन्छ, फेरि सुधार्न दिइन्छ तब न सिकिन्छ । यहाँ त विद्यार्थीहरुले सुनोस् नसुनोस, जबर्जस्ती पाठ सकाउन अनि ‘स्लाइडहरु’ सकाउनुलाई पढाइ भनिँदै छ । के यसरी पढाएर विद्यार्थीहरुले रचनात्मक हुन सक्छन् ? यसरी पढेको कुरालाई जीवन उपयोगी बनाउन सक्छन्?
Hospital Management Information Sys...
school software in butwal
Bright Laboratory Information Syste...